KEDU OTU ESI EWEPU ABỤ? - VIDEO NA ỌDỊYO - 2019
Ọtụtụ ndị ọkachamara na-ajụ otu ajụjụ na-akpali mmasị: otu esi egwu egwu, ihe omume, usoro dị mma iji chekwaa ... Ọtụtụ mgbe, ịkwesịrị ịkwụsị ịgbachi na faịlụ egwu, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ịdekọre egwu egwu, bido ibe ya ka ha bụrụ otu abụ.
N'ozuzu, ọrụ ahụ dị nnọọ mfe (ebe a, n'ezie, anyị na-ekwu nanị maka ịmepụta faịlụ, ma ọ bụghị idezi ya).
1) Olu egwu n'onwe ya bụ abụ anyị ga-ebi.
2) Mmemme maka edezi faịlụ faịlụ. E nwere ọtụtụ n'ime ha taa, na n'isiokwu a, m ga-egosiputa ihe atụ otu esi ewepụta abụ na usoro n'efu: enweghi ike.
Anyị na-ebipụ egwu (nzọụkwụ site na nzọụkwụ)
1) Mgbe ịmalitere usoro ihe omume ahụ, mepee abụ a chọrọ (Na mmemme, pịa "faịlụ / oghe ...").
2) Na otu egwu, na nkezi, na usoro mp3, usoro ihe a ga-eji 3-7 sekọnd.
3) Nke ọzọ, iji òké ahụ họrọ ebe anyị na-adịghị mkpa. Lee nseta ihuenyo n'okpuru. Site n'ụzọ, ka ịhọrọ ịchọta n'amaghị ama, ị nwere ike ịnụrụ mbụ ma chọpụta ebe ị na-adịghị mkpa na faịlụ ahụ. Na mmemme ahụ, ị ​​nwekwara ike ịmezie egwu: gbanwee olu, gbanwee ọsọ ọsọ, wepụ nkwụsị, na mmetụta ndị ọzọ.
4) Ugbu a, na panel anyị na-achọ bọtịnụ "ịpị". N'okpuru dị n'okpuru, a na-eme ka ọ pụta ìhè na-acha uhie uhie.
Biko mara na mgbe ịpịsịrị ịkpụ, usoro ihe omume ahụ ga-ewepu ngalaba a, a ga-ebipụkwa abụ gị! Ọ bụrụ na ị na-egbutu ebe na-ezighị ezi: pịa kagbuo - "Cntrl + Z".
5) Mgbe edechara faịlụ ahụ, a ghaghị ịchekwa ya. Iji mee nke a, pịa "faịlụ / mbupụ ..." menu.
Ihe omume ahụ nwere ike mbupụ abụ ahụ na top iri kachasị ewu ewu:
Aiff - usoro olu nke enweghi ike itinye ụda. Na-emekarị na-adịchaghị ala ugboro ugboro. Mmemme na-emeghe ya: Microsoft Windows Media Player, Roxio Easy Media Creator.
Wav - a na-ejikarị usoro a echekwaa music dapụtara na diski CD.
MP3 - otu n'ime usoro egwu egwu kachasị mma. N'ezie, e kesara egwu gị!
Ogg - Usoro nke oge maka ịchekwa faịlụ dị egwu. Ọ nwere oke mkparị, n'ọtụtụ ụzọ ọbụna karịa nke mp3. Ọ bụ na usoro a ka anyị na-ebupụ abụ anyị. Onye ọ bụla egwu egwu nke oge a na-enweghị nsogbu mepee usoro a!
FLAC - Usoro ntinye ederede n'efu. Ihe odide nke na-eme ka àgwà efu ghara ịdị. Ihe ndị bụ isi: koodu codec bụ n'efu ma kwadoo na ọtụtụ nhazi! Ikekwe ọ bụ ya mere usoro a ji enweta nkwanye ùgwù, n'ihi na ị nwere ike ịnụrụ egwu na usoro a na: Windows, Linux, Unix, Mac OS.
AES - Ọkpụkpọ ọdịyo, a na-ejikarị eji chekwaa egwu na diski DVD.
AMR - na-edekọ faịlụ ọdịyo na ọsọ ọsọ. Ejiri usoro a iji dochie olu olu.
Wma - Windows Media Audio. Nhazi maka ịchekwa faịlụ ọdịyo, Microsoft n'onwe ya mepụtara. Ọ bụ ihe a na-ewu ewu, na-enye gị ohere itinye ọtụtụ abụ na CD.
6) Ịbupụ na ịchekwa ga-adabere n'ogo faịlụ gị. Iji chekwaa "ọkọlọtọ" (3-6min.) Ga - ewe oge: ihe dị ka sekọnd 30.
Ugbu a, enwere ike imeghe faịlụ a na ihe ọ bụla ọkpụkpọ, akụkụ ndị na-enweghị isi ga-efu.